Solve the Drive won't Work on Windows | OS-ụlọ ahịa Blog
December 26, 2018 ecommerce Computer, Driver, OS-ụlọ ahịa, OSGEAR Support, ngwaahịa, nchekwa, User manual 0
Jiri nchọpụta nsogbu ntụziaka n'okpuru ma ọ bụrụ na ị wụnye CD, DVD ma ọ bụ Blu-ray mbanye bụ bụghị ike na-agụ ihe ọ bụla discs ma ọ bụ enweghị ike ịmata ihe ọ bụla discs.
The ntụziaka ga-enyere gị aka dozie nsogbu na ụfọdụ ma ọ bụrụ na mbanye akwụsịbeghị kpamkpam. The ntụziaka n'okpuru ike ga-eji maka ma esịtidem na mpụga CD, DVD ma ọ bụ Blu-ray draịva ma ụfọdụ ndị fundamentals pụrụ ịbụ a obere dị iche iche. Ezie na nke nke CD-ROM na-arụ ọrụ nwere ike na-ewute ewute maka ọrụ, ọ nwere ike na-eme ka ọnwụ nke data, akpaghasị nkịtị na-arụ ọrụ usoro, were gabazie. The ihe ọmụma iji merie njehie nke CD-ROM na-arụ ọrụ na-enye aka ma ọ bụrụ na onye chọrọ iji dozie njehie na enweghị nnọọ oge. Na nyere isiokwu, anyị ga-ele anya na multiple ngwọta na-edozi ihe iseokwu nke CD-mbanye-adịghị arụ ọrụ.
Part 1: Iji Hardware na Ngwaọrụ mmezima ngwaọrụ >>>
Nke a bụ isi usoro tufuo nsogbu nke CD-mbanye-adịghị arụ ọrụ. Na ole na ole dị mfe nzọụkwụ na-eso, ọrụ ike ha DVD na CD-ROM ghọtara site usoro. Ebe a na-nzọụkwụ:
Kpatụ Windows isi + R imeghe Run dialog igbe.
Na Control Panel, chọta search igbe, na ụdị 'mmezima ngwaọrụ', na mgbe ahụ enweta na 'Nchọpụta nsogbu'.
Ị ga-pịa 'Hazi ngwaọrụ' na-depụtara n'okpuru Hardware na Sound Item. Ọrụ nwere ike-kpaliri pịnye ha okwuntughe n'ihi nkwenye.
Ọ bụrụ na nke a adịghị dozie njehie, i nwere ike ịga na na na-esonụ ngwọta.
Part 2: The Kasị Common Reason Your Njìàrụọrụ Na-adịghị >>>
N'adịghị ka ndị siri ike mbanye na mmiri na-anya-na-na-adịghị adị na kọmputa ma ọ bụ mpụga mbanye, mmezi ike draịva ị na-azụta na-bụghị mgbe niile Ẹnam ekese Ị na njikere iji. Kama, ha na-na na na a kpam kpam oghere ala-echiche bụ na ọgwụgwụ ọrụ na onye ga-eme ihe ha na-achọ na mbanye, ya mere ọ dịghị uru preformatting ma ọ bụ n'ụzọ na-agbanwe agbanwe na mbanye na mmepụta. Ya mere, mgbe ị na-etinye na mbanye gị usoro, Windows nanị chere maka gị aka ikpebi ihe na-eme na mbanye kama na-akpaghị aka formatting na-agbakwunye ya na mbanye ndepụta.
nzọụkwụ 1: Pịa Malite > Run. pịnye na ” sysdm.cpl ” n'ime dialog igbe na ọ na-egosi. Pịa na na na na ọ ga-ewetara gị ka a “System Properties” dialog igbe.
nzọụkwụ 2: Gaa na taabụ “Hardware” na pịa “Ihe Njikwa Ngwaọrụ” ozugbo e ịchọta gị ọkwọ. M na-akpọ “DVD / CD-ROM draịva.” Ugboro abụọ-pịa na ya na-egosi na ya na-na e kwesịrị ọzọ ngwaọrụ n'okpuru ya. Mine nwere a ajụjụ akara ma na ụfọdụ, ọ pụrụ ịbụ ihe mkpu mmeri na-esote aha. M na-akpọ “AOPEN DUW1608 / ARR” ma ọ bụrụ na gị na di iche iche, ọ dị mma.
nzọụkwụ 3: Abụọ-pịa ọhụrụ kpughere ngwaike “AOPEN DUW1608 / ARR” na na ọ bụ nke dialog igbe ga-apụta. Gaa “Driver” tab ma họrọ “update Driver…” si mkpọchi n'okpuru.
nzọụkwụ 4: ugbu a, họrọ “Wụnye site na ndepụta ma ọ bụ otu ebe” na pịa Next. Na ọzọ igbe họrọ “Ekwela chọọ. M ga-ahọrọ onye na-akwọ iji wụnye” na ọzọ, pịa esote. A dị iche iche igbe ga-egosi na dakọtara ngwaike gị ọkwọ. M họrọ na ala ikwere na ọ bụ na-adịbeghị anya, ọ na-akpọ “CD-ROM mbanye [IMAPI ntọala 1,5].” Pịa ọzọ na rụchaa ntụziaka ọ na-enye gị.
Part 3: Ma eleghị anya, ya mere site na a na-ezighị ezi DVD >>>
Ugboro abụọ-click System
Pịa hardware tab
Pịa njikwa ngwaọrụ
OE ATA / ATAA njikwa òtù abụọ click ide ọwa
Pịa na ihe elu ọnọdụ tab
Device 0 ma ọ bụ 1 kwesịrị na ultra DMA (bụghị POI) ugbu a nyefe ọsọ kwesịrị ultra DMA
(ma ọ bụrụ na ọ bụghị) iwepụ ngwaọrụ mbanye na DVD mbanye (m ikpe na ọ bụ Pioneer mbanye) – reboot na kọmputa na-reinstall – ozugbo reinstalled reboot kọmputa ọzọ – megharịa 1 – 7 ọzọ na ma ntọala ndị azụ ultra na ihe bụ nsogbu bụ ofu.
Part4: Na-agbanwe agbanwe ngwa anya mbanye leta ọrụ >>>
site ndabere, niile nsụgharị nke Windows ekenye ihe ngwa anya mbanye ọzọ na-mbanye leta esonụ ndị ọ bụla obodo mpịakọta. Ọ bụrụ na ị ekemende wụnye ihe ọzọ ike disk ma ọ bụ repartition gị mbanye ike ọzọ mpịakọta, akwụkwọ ozi e kenyere ngwa anya mbanye ike ịgbanwe, nke nwere ike na-emegharị wụnye software na-agbali iji nweta ngwa anya mbanye dị ka nke ochie ozi.
Ị pụrụ izere nke a “musical oche” reassignment nke ngwa anya mbanye akwụkwọ ozi site na iji aka tinye na-ekenye ngwa anya mbanye a mbanye leta na dị elu karịa mbanye leta ọ bụla ẹdude obodo ma ọ bụ netwọk olu. Inye ndị kasị elu dị mbanye leta, na, na ngwa anya mbanye egbochi Windows si ebi mejupụtara na mbanye leta. Ọ bụrụ na i nwere abụọ ngwa anya draịva, ekenye ha Z: na Y:. Ekenye a dị iche iche mbanye akwụkwọ ozi ngwa anya mbanye ke Windows XP, n'ihu dị ka ndị a:
Computer Management ngosipụta ụgbọala akwụkwọ ozi e kenyere
1. Si Control Panel, họrọ Nlekọta Ngwaọrụ > Computer Management.
2. Mụbaa osisi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji gosi na ihe na Nchekwa alaka.
3. Pịa Njìàrụọrụ Management, ma chọta gị ngwa anya mbanye na ala-nri ebi ndụ.
4. Right-pịa ngwa anya mbanye icon na-egosipụta ihe ndị ọzọ-chebaara menu, na-ahọrọ Change Drive Letter na Ụzọ menu item gosipụta Change Drive Letter na Ụzọ dialog.
5. Pịa Change button na iji ndọpụta ndepụta ekenye ihe dị mbanye akwụkwọ ozi ngwa anya mbanye.
6. Azọpụta gị mgbanwe na ụzọ ọpụpụ. Ozugbo ị na-anabata mgbanwe, ọhụrụ mbanye leta ewe mmetụta ozugbo.
Musical DRIVE akwụkwọ ozi
Ọ bụrụ na ị na-agbanwe mbanye leta ọrụ maka ihe ngwa anya mbanye, ozugbo na mgbe wụnye mbanye ma ọ bụ na sistemụ. Ọ bụrụ na ị na-eji na mbanye n'okpuru mbụ ya akwụkwọ ozi iji wụnye software, na software ga-emecha-agbali iji nweta mbanye iji ochie mbanye leta.
Atea na, gị ọkwọ ụgbọala ga-arụ ọrụ ezi. Nweta Ọzọkwa Ozi, Pịa ebe a
Optical Drive Device iberibe nkọwa nke nkọwa zuru ezu
Nkeji edemede Họrọ AtiyaDriver(200) 3G / 4G – Device(40) ngwa(5) TV Kaadị(17) video Kaadị(20) ikuku Device(115)OS-ụlọ ahịa(262) Life(90) News(33) Ndị ọzọ(76) n'ọkwá(33) Technology(56) User manual(8)OSGEAR Support(16) netwọk(6) nchekwa(10)ngwaahịa(589) 3G & ikuku kaadị(16) Apple iPhone iPad iPod(18) Camera & Parts(10) Computer(116) CPU Processor(158) Electronics(9) IC Chipset(2) Ekwentị mkpanaka(248) nche Ngwaahịa(12) mbadamba PC(40)
3 ọnwa 1 izu gara aga
Nwere ike ikwu : (Dell 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 Ikuku Bluetooth Card ọkwọ ụgbọala Windows Download) e bipụtara na OS-ụlọ ahịa Blog
Dell 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 Ikuku Bluetooth Card ọkwọ ụgbọala Windows Download | OS-ụlọ ahịa Blog
Dell WiFi Kaadị Driver Support - 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 Akwadoro maka ọgwụgwụ-ahịa. Gụnyere download nhọrọ maka ọkwọ ụgbọala-na-na-akwọ ụgbọala-na
Gụọ akụkọ zuru ezu Share
4 ọnwa 3 ụbọchị gara aga
Nwere ike ikwu : (OSGEAR DW1300BT RTL8814AE WiFi Ikuku WLAN Kaadị ọkwọ ụgbọala maka Windows Mac Linux Download (oyiri)) e bipụtara na OS-ụlọ ahịa Blog
OSGEAR DW1300BT RTL8814AE WiFi Ikuku WLAN Kaadị ọkwọ ụgbọala maka Windows Mac Linux Download (oyiri) | OS-ụlọ ahịa Blog
OSGEAR Ikuku usoro ọkwọ ụgbọala nkwado - RTL8814AE-atụ aro ka ọgwụgwụ ahịa. Gụnyere download nhọrọ maka ọkwọ ụgbọala-na-na-akwọ ụgbọala-na RealTek / Qualcomm
HD Graphics Technology_Internet ngwaọrụ Model 64-bit Windows ihe Njikwa Ngwaọrụ Series Driver Support processors Nokia Public Nzube OS-ụlọ ahịa CPU Samsung ọkwọ ụgbọala nkwado processor iwu nkọwa Ekwentị mkpanaka software HTC Technology Intel
Easy-enweta ihe ọmụma ~